आमाले घाँटी थिचेर गरिन् छोराको ह त्या ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आमाले घाँटी थिचेर गरिन् छोराको ह त्या !
काठमाडौं । ब्राजिलमा एक आमाले नै आफ्नो छोराको हत्या गरेकी छन् । आफ्ना ११ वर्षीय छोरालाई उनले घाँटी थिचेर हत्या गरेकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्रीमानसँग सम्बन्धबिच्छेद गरेर बसेकी एलक्जेन्ड्रा डोगोकेन्स्गीले आफ्नै छोरालाई घाँटी थिचेर हत्या गरेकी हुन् ।
राफेल नाम गरेका ११ वर्षीय बालक राती ढिलासम्म आमाको फोनमा गेम खेलेर बसेको रिसमा उनले आफ्नै छोरोको घाँटी थिचेर हत्या गरेकी हुन् । ब्राजिलका पुलिसले आमाले उक्त अपराध स्विकारेकी छन् । उनी ३३ वर्षीया महिला भएको बताइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
उपत्यकामा यस्ता लापरवाहीबाट हुन्छ बढी दुर्घटना
काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चालकको लापरवाहीका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नौ हजार ४६१ दुर्घटना भएकामध्ये अधिकाशं चालकको लापरवाहीबाट हुने गरेको छ । उपत्यकामा चालकको लापरवाहीबाट आठ हजार ४७२ दुर्घटना भएको छ । यस्तै, मापसे सेवनबाट ४३५, तीव्रगतिबाट ४२२, ओभरटेकबाट ५८, यान्त्रिक गतिविधि ४९, सडकको दुरावस्थाबाट १६, पैदलयात्रुको लापरवाहीबाट चार र मौसम÷चौपायाबाट पाँच दुर्घटना भएको छ ।
उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाबाट निधन हुनेमा १७ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बढी रहेका छन् । महाशाखाका अनुसार आव २०७६÷७७ मा उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाबाट १४५ जनाको निधन भएको छ । जसमा १७ देखि ३५ वर्षका ९४ जना रहेका छन् । यस्तै १६ वर्ष मुनिका ७ र ३६ वर्षभन्दा माथिका ४४ जना रहेका छन् । उपत्यकामा गत आव २०७५÷७६ मा सवारी दुर्घटनाबाट २५४ जनाको निधन भएको थियो ।
उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाबाट निधन हुनेमा दुई पाङ्ग्रे चालक बढी रहेका छन् । आव २०७६÷७७ मा सवारी दुर्घटनाबाट ७६ जना दुई पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल÷स्कुटर) चालकको निधन भएको हो । यस्तै, निधन हुनेमा ४७ पैदलयात्रु, बस दुर्घटनाबाट ६, साइकल दुर्घटनाबाट पाँच, ट्रक दुर्घटनाबाट पाँच, ट्रिपर दुर्घटनामा तीन र कार दुर्घटनाबाट तीन जनाको निधन भएको छ ।
पहिलो पटक प्रहरी निरीक्षकमा पनि देखियो कोरोना संक्रमण, यी स्थान का हुन् ति प्रहरी निरीक्षक !!